अब चरिकोटमै हाडजोर्नी उपचार - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
अब चरिकोटमै हाडजोर्नी उपचार
आवाज संवाददाता ४ पुष २०७३, सोमबार
दोलखाको प्रस्तावित चरिकोट अस्पताल (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)मा अत्याधुनिक हाडजोर्नी उपचार सेवा सुरु भएको छ । सो सेवाको उपचार गर्ने पद्धती नाम ’साइननेल‘ दिएको छ ।
लामो हाड भाँचिएका बिरामीलाई हातखुट्टामा साइननेलको प्रयोग गरिने यो पद्धती निशुल्क रुपमा आइतबारबाट सुरु गरिएको अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. विनोद दंगालले जानकारी दिए । यो सेवा सुरु भएपछि दोलखा र आसपासका लामो हाड भाँचिएका विरामी अब काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने छ ।
हातखुट्टा भाँचिएर सामान्य प्लास्टरले उपचार नहुने विरामीहरुका लागि यो सेवा अत्यन्त नविनतम् उपचार पद्धति भएको उनले बताए । भाँचिएको खुट्टा तथा हातको बिचको जोर्नीदेखि तल्लो भागसम्म फलामको पाईप (नेल) राखेर गरिने उपचार पद्धती हो । सबै सेवा निशुल्क उपचार हुँदै आएको चरिकोट अस्पतालमा पछिल्लो हाडजोर्नीको उपचार पनि निशुल्क हुने डा. दंगालले बताए ।
तत्कालका लागि अस्पतालमा ग्राण्डी अस्पताल काठमाडौंका वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा. भाष्करराज पन्तले गर्नेछन् । केही दिन अस्पतालमै बसेर त्यहाँका विशेषज्ञ डाक्टरहरुलाई तालिम दिने छन् । ‘सामान्य केसहरु तालिमपछि यहाँकै डाक्टरहरुले गर्नुहुन्छ’ डा. पन्तले भने ‘जटिल केसहरु आएमा यहाँबाट खबर पुगेपछि म आफैं आएर उपचार गर्छु ।’ काठमाडौंदेखि चरिकोटको दुरी ४÷५ घण्टाको सडक यात्रा हुने भएकाले पनि उपचारका लागि ओहोरदोहोर गर्न सकिने उनले बताए ।
यो नेल प्रयोग गर्दा बिरामीहरु छिटो हिंडडुल गर्नसक्ने र यो प्रविधि निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने ग्रान्डी हस्पिटलका हाड जोर्नी विशेषज्ञ डा. भाष्करराज पन्तले जनाए । भियतनाम लडाइँ पछि हाड जोर्नी विशेषज्ञहरु उपकरणको अभावमा उपचार गर्न बञ्चित भएपछि डा. जेबिभ जिर्कलले यो प्रविधि निर्मण गरेको र संसारभर निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने डा. पन्तले बताए ।
निशुल्क रुपमा भित्र्याइएको यो नेलको बजारमूल्य ३० हजार रुपैंया रहेको छ । नेपालभरि यो प्रविधि भित्र्याउने प्राथमिक केन्द्र ११ औं हो । यस प्रविधिको वीर अस्पतालको काठमाडौं ट्रमा सेन्टर, ग्रान्डि हस्पिटल काठमाडौं, पाटन हस्पिटल, वि.पि. कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, आनन्द वन अस्पताल काठमाडौं, नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौं, तानसेन अस्पताल पाल्पा, अछामको बयलबाटा लगायतले भित्र्याएको उलने बताए ।
न्याय हेल्थ नेपालले एक वर्ष अघिदेखि व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरेको चरिकोट अस्पतालमा सबै सेवा निशुल्क रहेका छन् । चरिकोट अस्पतालका गभर्नेन्स पार्टनरसीप निर्देशक बुसन पीकेडी प्रसाईले हालसम्म ४ हजार २ सयको ओपीडी सेवा र ७ सयभन्दा बढी विरामीको जटिल सल्यक्रिया गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै ७ सयभन्दा बढीको सामान्य सुत्केरी र ९० जनाको सी सेक्सन सुत्केरी गराएको बताए ।
सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याँउदै
अस्पतालले दोलखाका ५ वटा गाविसमा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रत्येक गाँउमा स्वास्थ्य परिचालिका नियुक्त गरेर उनीहरु मार्फत स्थानीयको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने बताए । सुगर, प्रेसर , दम लगाएतका दिर्घ रोगीहरुलाई औषधी वितरण, सामान्य चेकजाँच, गर्भवतीहरुलाई स्वास्थ्य परामर्श तथा परीक्षण लगायतका सेवा प्रदान गर्न लागिएको अस्पतालका निर्देशक बुसन प्रसाईले जाकारी दिए । उनले कुन कुन गाविसमा गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी जनवरीको अन्तिम साताबाट सुरु गरिने बताएका छन् ।